Rasaas xooggan oo maalintii 2-aad la isku waydaarsano madaarka Gaalkacyo, iyo xaafada Wadajir ee koonfurta Gaalkacyo. – Radio Daljir
Gaalkacyo, No, 22 ? Waxaa maalintii 2-aad madaarka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ka socda madaafiic ay is-waydaarsanayaan ciidanka madaarka Gaalkacyo, iyo dablay ku sugan xaafada Wadajir ee Koonfurta Gaalkacyo.
Wararku waxay intaasi ku darayaan in illaa xilligaan aan la cayimi Karin khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay israsaasayntaasi, waxaase guud-ahaanba xaafadaha magaalada Gaalkacyo laga maqlayaa maantay daryanka madaafiicdaasi oo maalintii 2-aad ka dhacay Gaalkacyo.
Masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Mudug ee Puntland ayaa Galmudug ku eedeeyay inay ka dambeeyeen madaafiicdii shalay lagu soo tiiray madaarka Gaalkacyo.
Dhanka kale, maamulka Gal-mudug ayaa arrintaasi ku tilmaamtay mid been abuur ah, sheegtayna inay xaq iyo xaquuq ku leeyihiin dhaqaalaha kasoo xarooda garoonka Gaalkacyo.
Dadwaynaha Gaalkacyo ayaa cabsi xooggan ka qaba in israsaasayntu inaasi ka siibado, oo arrintu isku badasho dagaal kafool kafool ah, hase ahaatee waxaa la tilmaamayaa inay jiraan waan-waan nabadeed oo ay ku kala baaqeen duubabaka dhaqanka ee labada dhinac.